तपाइको नयाँ वर्षको योजना के छ ? - अब हाम्रो पालो - प्रकाशितः चैत्र ३०, २०७३ - साप्ताहिक
तपाइको नयाँ वर्षको योजना के छ ?
ध्यान शिविर तथा सांगीतिक कार्यक्रममा सहभागिता, आध्यात्मिक क्रान्तिसम्बन्धी पुस्तक–लेखनका साथै आध्यात्मिक यात्रा गर्ने ।
पहाडको काफल खाएर भारत फर्कने ।
नयाँ वर्षमा कम्तीमा तीनवटा देश घुम्ने । नेपालका पूर्वका जिल्ला घुम्ने । फुर्सद मिलाएर जति सक्यो त्यति पुस्तक पढ्ने र चलचित्र हेर्ने । विवाह गर्ने सम्भावना छैन । जे गर्दैछु त्यसमा अझ राम्रो गर्ने । धेरै कुरा सिक्न बाँकी छन् । बुझ्दै सीप हासिल गर्दै जाने ।
बीएस्सी प्रथम वर्षको परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने ।
अरूलाई धेरैभन्दा धेरै खुसी दिन मन छ ।
सबै नेपाली खुसी भएको हेर्न मन छ ।
नियमित रूपमा साप्ताहिक पढ्ने ।
बोर्डको परीक्षा आउँदैछ । घुँडा धसेर पढ्नुछ ।
नयाँ क्यामेरा किन्न मन छ ।
केही छैन योजना । भयो भने भनौला । नयाँ साल आउनलाई अझै समय छ ।
नयाँ पात्रो किन्ने योजना छ पुरानो पात्रो फालेर ।
कुनै एउटा नयाँ योजना बनाउने ।
टेलिभिजनमा जागिर खाने ।
मेला घुम्ने, विभिन्न परिकार खाने तथा अन्य समयचाहिँ अफिसमै बिताउने ।
नयाँ वर्षमा भोट हाल्ने योजना छ ।
विदेश घुम्ने रहर छ ।
निद्रा पुग्ने गरी सुत्ने ।
आफूले किनेका तर पढ्न बाँकी पुस्तकहरू पढ्ने ।
नयाँ वर्षदेखि सामाजिक सञ्जाल कमै चलाउने ।
म्युजिक भिडियो वा चलचित्रमा अभिनय गर्ने ।
राम्रो जागिर खाने ।
विवाह गर्ने ।
नयाँ लुगा किन्ने, नयाँ–नयाँ ठाउँ घुम्न जाने ।
विदेशको ग्रिनकार्ड लिने विचार छ ।
व्यापारमा हात हाल्ने सोच छ ।
स्टुडेन्ट भिसा लिने, विदेश गएर बस्ने ।
कानुन विषयमा भर्ना लिइयो । अब यसैलाई निरन्तरता दिने योजना छ ।
नयाँ वर्षमा नयाँ के हुनु छ र ? फरक भए पो रमाइलो । उही घिसिपिटी जिन्दगी ।
म कम्तीमा ६० वटा पुस्तक पढ्नेछु ।
कामकाजलाई थाती राखेर भए पनि सिमला घुमिन्छ ।
चर्चित व्यक्तिसँग सेल्फी लिने होड किन चलेको होला? चैत्र २६, २०७४